सार्वजनिक स्थलमा एम्बुलेन्स हल्लिरहेको पाइयो, स्थानीयले प्रहरी बोलाएपछि देखियो यस्तो लाजमर्दो दृश्य | Khabar Sadan खबर सदन
Home विचित्र सार्वजनिक स्थलमा एम्बुलेन्स हल्लिरहेको पाइयो, स्थानीयले प्रहरी बोलाएपछि देखियो यस्तो लाजमर्दो दृश्य
सबैजना यस महामारीमा बिरामीहरूको लागि एम्बुलेन्सको अभावका बारे सजग छन्, तर यदि मानिसहरू एम्बुलेन्सको दुरुपयोग गर्दै अर्कै काम प्रयोग गर्न थाले के होला? भारतमा एम्बुलेन्सभित्र त्यस्तो काम गर्दा केही मानिसहरु पक्राउ परेका छन् । वास्तवमा यो सम्पूर्ण घटना वाराणसीमा रहेको रामनगर पुलिस स्टेशन क्षेत्रमा पर्ने सुजाबाद चौकीमा पनि यस्तै घटना भयो ।
केही समयदेखि एम्बुलेन्स रोकिएको थियो । एकै छिनमा त्यो हल्लिन थाल्यो । मानिसहरु डराए र प्रहरीलाई फोन गरे । जब प्रहरी आयो तब अचम्मको दृश्य देखियो । त्यहाँ एम्बुलेन्सभित्र रमाइलोमा ब्यस्त तीन युवक र एक युवती भेटिए । प्रहरीले ती तीन युवक र एक युवतीलाई समातेर एम्बुलेन्स क ब्जा गरी जे ल पठाई चारजनाको बिरुद्द मु द्दा दर्ता गरेको छ ।
यी सबै भयो जब मानिसहरूले एम्बुलेन्सलाई सुजाबाद पुलिस स्टेशन नजिकैको सुनसान क्षेत्रमा भेट्टाए, धेरै समय पछि पनि एम्बुलेन्स त्यही भएकाले र त्यो हल्लिन थालेकोले शंका भयो । त्यस इलाकाका व्यक्तिहरू शंकास्पद भए र तिनीहरूले पुलिसलाई फोन गरे र अनुसन्धान गरे र यो स्त ब्ध पार्ने खुलासा भयो ।
पुलिसले तीन युवा र एक युवतीलाई बन्द एम्बुलेन्सबाट बाहिर निकाल्यो । यस पछि सबै चार र एम्बुलेन्सह पनि रामनगर पुलिस स्टेशनमा लगियो । रामानगर प्रहरी चौकीमा मु द्दा दर्ता गरी तीन जना युवाको बिरूद्ध सार्वजनिक ठाउँमा यस्तो कार्य गरेको आरोपमा जे ल पठाइएको थियो ।
आजतकका अनुसार यससँगै, एम्बुलेन्स पनि ज फ त गरियो । यस सम्बन्धमा कोतवाली सर्कलका एसीपी प्रवीण सिंहले भने कि सार्वजनिक स्थानमा अ श्‍ली ल कार्य गर्ने आरोपमा चार जना बिरुद्द मु द्दा हालेको छ । उनले भने कि एम्बुलेन्स मन्डुआडीह क्षेत्रको गंगा सेवा सदन भन्ने निजी अस्पतालमा रहेको छ जसलाई अस्पतालले एक युवालाई भाडामा दिएको थियो ।
यस बाहेक यस अस्पतालका धेरै उजुरी र अनियमितताहरू पहिले पनि प्राप्त भएका छन्, जुन अझै अनुसन्धानमा छन् ।
Previous articleओलिसामु ८ सर्त माधब नेपालका
Next articleउपेन्द्र यादवलाई आयो प्रधानमन्त्रीको यस्तो प्रस्ताव, शेरबहादुर देउवाले के गर्लान् ?
काठमाडौं कसैको विवाहमा जाँदा खाना मन परेन् भने तपाईं के गर्नुहुन्छ ? खाना कम खानुहुन्छ वा अर्को खाना मगाउनुहुन्छ, हुनसक्छ तपाईं खाना नै नखाएर फर्किन...
निद्रा किन लाग्छ ? के यो पृथुवीमा निन्द्रै नलाग्ने मनिस छन र? अन्तिम्को लाइन...
निद्रा मानिसको लागि मात्र नभएर सबै जीवहरूको लागि खाना, पानी र यौन जत्तिकै आवश्यक हुन्छ, चाहे त्यो निकै ठुलो हात्ती होस या निकै सानो कमिला, सबै प्राणीहरू...
काँग्रेसमा हिन्दु राष्ट्रका सबैभन्दा विरोधी रामचन्द्र पौडेल हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा उत्रिनुको कारण के ?
काठमाडौं– महाधिवेशनको निकटतासँगै नेपाली काँग्रेसमा मतदाता (महाधिवेशन प्रतिनिधि) हरुलाई प्रभावित पार्ने होडबाजी सुरु भएको छ । खासगरी पार्टीका राष्ट्रवादी कित्तालाई प्रभाव पार्न नेताहरुबीच एक प्रकारको...
अब वित्तीय कर्मचारीहरू आन्दोलनमा जाने, किन जाने
सामाजिक सुरक्षा कोषको ऐन, नियमावली र कार्यविधिमा संशोधन नगरी त्रास देखाएर कोषमा सहभागी गराउने प्रयत्न भए आन्दोलनमा उत्रिने वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरूले बताएका छन् । विभिन्न बैंक...
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जनता, कार्यकर्ता कोही नभएर माओवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरु बि’ग्रिएको स्वीकार गरेका छन् । मंगलबार पेरिसडाँडामा पोष्टबहादुर बोगटी...